मोरङको चुनावः क्लिन स्वीप गर्ने कांग्रेस र वाम गठबन्धनको दाबी - १८ मंसिर २०७४, NepalTimes
मोरङको चुनावः क्लिन स्वीप गर्ने कांग्रेस र वाम गठबन्धनको दाबी
१८ मंसिर, बिराटनगर । मुलुककै सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको मोरङमा चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । काठमाण्डौंपछिको सबैभन्दा बढी सिट संख्या भएको मोरङमा प्रतिनिधिसभातर्फ ६ र प्रदेशसभातर्फ १२ सिट संख्या छ ।
मोरङमा स्वतन्त्रसहित १८ दलका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । यीमध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि तीन महिलासहित ६१ जना उम्मेदवार छन् । प्रदेशसभातर्फ ८ महिलासहित १०८ जना उम्मेदवार छन् ।
कुल मतदाता ६ लाख ४४ हजार ७ सय ८२ मतदाता रहेको मोरङमा ७५८ मतदान केन्द्र छन् ।
साना र ठूला गरी १८ दलले चुनावमा सहभागिता जनाए पनि मोरङ जिल्लामा वाम गठवन्धन र लोकतान्त्रिक गठवन्धनवीचमै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यद्यपि यहाँ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमको पनि केही सिट जित्ने दाबी छ ।
मोरङ जिल्लामा कुन दलले कति सिट जित्ने आँकलन गरेका छन् ? यसबारे छोटो चर्चा गरौंः
कांग्रेसको दाबी- ६ सीट
प्रतिनिधिसभातर्फ कांग्रेसले मोरङका पुरै ६ वटै सिट जित्ने दाबी गरेको छ । कांग्रेस जिल्ला सभापति डिकबहादुर लिम्वुले जिल्लाका ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकाल्न कडा मेहनत गरिएको र सोही अनुसारको मतपरिणाम कांग्रेसकोे पक्षमा आउने दाबी गरे ।
लिम्बुले भने, ‘स्थानीय तहको मत परिणामलाई हेरेर हुँदैन, अहिले मोरङका सबै क्षेत्रमा हाम्रो अवस्था निकै राम्रो छ ।’
सबै सीट जित्ने वाम गठबन्धनको दाबी
कांग्रेसले जस्तै वाम गठबन्धनले पनि मोरङबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका पुरै सिट जित्ने दाबी गरेको छ । मोरङमा एमाले त्यसै पनि बलियो रहेको र यसपल्टको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रवीच गठबन्धन भएकाले सहजै जित्ने उसको दाबी छ ।
एमाले र माओवादीवीच तालमेल हुँदा मोरङका ६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दुईवटा क्षेत्र माओवादीले पाएको छ । मोरङ ४ र ५ मा माओवादीका उम्मेदवार छन् भने बाँकी ४ वटामा एमालेका उम्मेदवार छन् । एमालेले प्रदेशमा गठबन्धनले ५ सिट र प्रदेशमा १२ सिट जित्ने दाबी गरेको छ । प्रदेशमा माओवादीले ६ सिट पाएको छ भने एमाले पनि ६ सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ ।
एमाले मोरङका अध्यक्ष विनोद ढकालले विगतको चुनावमा एमाले र माओवादीले पाएको मतको विश्लेषणका आधारमा सतप्रतिशत जित बामगठबन्धनले निकाल्ने दावी गरे ।
संघीय समाजवादी फोरमः दुई सिटमा दाबी
मोरङ ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको संघीय समाजवादीले ५ र २ नम्वर निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गर्ने दाबी गरेको छ ।
संघीय समाजवादीले दावी गरेको मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादव उम्मेदवार छन् । त्यसैगरी २ नम्वर निर्वाचन क्षेत्रमा संघीयबाट युवराज कार्की उम्मेदवार छन् ।
पहिलो संविधानसभा चुनावमा मोरङका ९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेसी जनअधिकार फोरमले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४, ५, ६ र ७ मा जित हात पारेको थियो । फोरममा आएको फुटसँगै अहिले संघीय समाजवादी फोरमको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ । दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा फोरमले सबै क्षेत्र गुमाउन पुग्यो ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ५ मा संघीय फोरमको उपस्थिति अन्यत्र भन्दा केही बलियो मानिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा पर्ने बिराटनगर महानगरपालिकाका १३ देखि १८ नम्बर वडासम्म सबै संघीय समाजवादीले जितेको थियो । त्यस्तै यसक्षेत्रमा पर्ने रंगेलीका ४ वडामध्ये २ वटामा फोरमले र दुईवटामा माओवादीले जितेका थिए ।
संघीय फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवले क्षेत्र नम्वर ५ र २ मा आफ्नो पार्टीको पकड भएकाले दुबै निर्वाचन क्षेत्रमा जित सुनिश्चित भएको दाबी गरे । यादवले प्रदेश सभाको कुल १२ सिटमध्ये ५ सिट जित्ने दावी गरे ।
फोरमबाट ५ नम्बर प्रदेशको उम्मेदवार समेत रहेका यादव भन्छन, ‘हामीले कडा मेहनत गरेका छौं, मतदाता उत्साही देखिएका छन्, क्षेत्र नम्वर ५ र २ मा हाम्रो जित सुनिश्चित छ ।’
मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ मा कांग्रेसका अमृत अर्याल र माओवादीका शिवकुमार मण्डल उम्मेदवार छन् भने संघीय समाजवादी फोरमबाट जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार उम्मेदवार छन् । यहाँ राजपाका तर्फबाट बद्रीप्रसाद मण्डलको पनि उम्मेदवारी परेको छ ।
यस क्षेत्रमा स्थानीय चुनावको मतको विश्लेषण गर्दा एमाले र माओवादीको १९ हजार, कांग्रेसको १७ हजार र फोरमको १३ हजार देखिन्छ । अन्य दलबाट फोरम उम्मदेवारले ३/४ हजार मत तान्न सके भने मोरङ ५ मा फोरमले जित्दैन भन्ने स्थिति देखिँदैन । तर, मोरङको क्षेत्र नम्बर २ मा भने फोरमको दाबी खासै पुग्न सक्ने देखिँदैन ।
क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेका ऋषि पोखरेल र कांग्रेसका डा. मिनेन्द्र रिजाल उम्मेदवार छन् भने फोरमले युवराज कार्कीलाई उठाएको छ ।